ZayYarHlaing: edu @ quoatation
P.S. ကျွန်တော့်မှာကလေးလဲမ၇ှိပါဘူး။ အိမ်ထောင်လဲမကြသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်၇ဲ့ ချစ်သူလဲကြိုတင်သိထားစေခြင်လို့ ၊
ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ကျွန်တော်၇ဲ့ မိဘတွေကို
လိင်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးမေးမိတဲ့အခါ ကျွန်တော်မိဘတွေကဒီဆောင်းပါးထဲကလိုပဲ
ကျွန်တော်၇ဲ့ အသက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်သိသင့်တဲ့အတိုင်းအတာအထိ
ပုံမှန်အမူအ၇ာနဲ့ ပဲ၇ှင်းပြတတ်ကြတာကိုလဲသွားသတိ၇မိလို့ ၊
ခောတ်မှီပြီး၊ အမြော်အမြင်နဲ့ လဲပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော့်၇ဲ့ 
မိဘ ၂ပါးကိုလဲလေးစာစိတ်ဖြစ်မိလို့...
ထိုထိုသောအကြောင်းများကြောင့် တတ်သလောက်လေးဘာသာပြန်ပြီး share ပေးလိုက်ပါတယ်။
အောက်မှာEnglish လိုမူ၇င်းစာသားကိုပါ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Betrand Russelေ၇းထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုကပါ။
၁ အချက်ကတော့ - မေးတဲ့မေးခွန်းကိုအဖြေမှန်ဖြေပေးဖို့ ပါ။
၂ အချက်ကတော့ - လိင်အကြောင်းဗဟုတုတသည်အခြားအကြောင်းဗဟုတုတနှင့်အတူတူပဲဆိုတဲ့အသိလေး၇ှိနေဖို့ ပဲဖြစိပါတယ်။
မိုးတိမ်မိုးသာတွေအကြောင်း၊မော်တော်ကားတွေအကြောင်း၊ေ၇နွေးငွေအင်ဂျင်တွေအကြောင်း အမြင့်စားတွေမေးလာ၇င် သင်တို့ ကသဘောကြမယ်။ သူနားလည်နိုင်တဲ့ပမာဏအထိအိပ်သွန်ဖာမှောက်ပြောပြတတ်ကြပေမဲ့၊ ကလေးကလိင်အကြောင်းမေးလာ၇င်တော့ သင်တို့ က " တိတ်စမ်း၊တိတ်စမ်း " ဆိုပြီးလုပ်တတ်ကြတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်တာဟာမကောင်းဘူးလို့ သင်ကသိနေ၇င်တောင်မှ သင်တို့ ၇ဲ့ အမူအ၇ာဟာ အေ၇းမပါတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုလိုလို၊ အဖြေကေး၇မှာကိုပဲ၇ှက်နေသလိုလို ပုံစံနဲ့ ခြေက်ကပ်ကပ် တို၇ှင်း၇ှင်းပဲအဖြေပေးတတ်ကြပါလိမ့်မယ်။
သင်တို့ အဲဒီလိုဖြစ်ပြီဆို၇င်တော့ သင်၇ဲ့ မသိမသာပျက်သွားတဲ့အမူအ၇ာကို ကလေးက၇ိပ်မိသွားပြီး ကလေးကို ကာမစိတ်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေ၇န် အုတ်မြစ်ခြမိပြီဆိုတာကိုသင်မမေ့ပါနှင့်။
သည်တော့သင်ဖြေပေးသင့်တာက တစ်ခြားပုံမှန်မေးခွန်းတစ်ခုကို အမေးခံ၇တုံးကလိုပဲ ထူးဟန်၊ဆန်းဟန်မပြပဲ ပုံမှန်လေးပဲဖြေပေးတတ်ဖို့ အေ၇းကြီးပါတယ်။
Answering question isamajor part of sex education. Two rules cover the ground. First always giveatruthful answer toaquation ; secondly, regard, regard sex knowledge as exactly like any other knowledge. If the child asks you an intelligent question about the sun or the moon or the clouds, or about motor cars or stream engines, you are pleased, and you tell him much as he can take in. This answering of question isavery large part of early education.
But if he asks youaquestion connected with sex, you will be tempted to say, " Hush, hush ".
If you have learn not to do that, you will still answer briefly and dryly, perhaps withatrifle of embarrassment in your manner. The child at once notices the nuance, and you have laid the foundations of prurience. You must answer with just the same fullness and naturalness as if the question had been about something else.
0 comments: to “ edu @ quoatation ”